Waxgaradka Beesha Dir oo sheegay in Axmed Shiddo ay Koox Meesha Keensatey - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Waxgaradka Beesha Dir oo sheegay in Axmed Shiddo ay Koox Meesha Keensatey
September 1, 2018 admin313
Waxaa Deeganada Soomaalida Itoobiya maalmahaan Shirar uga socdeen Waxgarad, Nabadoono, Salaadiin, Culimaudiin, Siyaasiyiin, Haween iyo Dhalinyaro ka tirsan Beesha Dir waxaana Shirarkaas loooga arrinsanayey Xaaladda Deegaanka Soomaalida Itoobiya maadaaama ay Beeshu tahay Beelaha ugu balaaran ee Degta Deegaanadaas.
“Markaan aragney qaabkii loo magacaabey Taliyayaasha ciidamada dhawaan oo aysan Beesha ka muuqan islamarkaana hal beel ay wada qaateen Xilalkaas markaana aragney Hogaan xumida Axmed Shido, Markaan Aragney Cadaaladdarada ay ku dhaqmeen Axmed Shiddo iyo Madaxweynaha Maamulka waxay Beesha Go’aansatey in aysan Beesha Dir ku aaaminin Masiirkooda labadaas Xubnood, maadaama ay weli ku shaqeynayaan Nidaamkii hore ee Cadaaladarada ku dhisnaa ” ayey yiraahdeen waxgaradkaas.
Waxgaradka Beesha Dir waxay sheegeen in aysan Dib dambe u aamini doonin Axmed Shiddo oo ay sheegeen in uu ka baxay Balamo hore oo Beesha la gaartey sidaa Darteed Beesha Dir waxay soo jeedisey in si deg deg deg Xilka Gudoomiyaha Xisbiga looga qaado maadaama uu waayey KalsoonidII Beesha isla markaana ay meesha ka baxdey Wada shaqeyntii.
“Waxaan ugu baaqeynaa Xubnaha Beesha ee Baarlamaanka ku jira in ay Gacan ka geystaan sidii meesha looga saari lahaa Axmed Shido, haddii ay taasi yeeli waayaan in ay ogaadaan in aan dib dambe loo soo dooran doonin sidoo kale Beesha waxay Dhawaan qaban doonaan Banaanbaxyo looga soo horjeedo Axmed Shido kaasoo ka dhici doono Dalka Gudihiisa iyo Dibadiisa “ ayey yiraahdeen Waxgaradkaas oo sheegey in Axmed uu weli ku socdo Habkii Hore ee aan ku dhisneyn Dimoqraadiyada.
Axmed Shido ayaa loo Dhawaan loo magacaabey Gudoomiyaha Xisbiga Dimoqaraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya waxaa uu hore u ahaa Wasiirka Isgaarsiinta Dowlada Federaalka itoobiya hase yeeshee Beesha Dir waxgaradkooda waxay sheegeen in Axmed Shiddo ay Koox Meesha keensatey sidaa darteed Beesha Dir aysan la shaqeyn doonin.
Dad Rayid ah oo lagu dilay Duqeyn ka dhacay Sh/Hoose